Album ထွက်မလာသေးပေမဲ့ Ktown4u Chart List မှာ တစ်ပတ်တာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး နံပါတ်(၁) ဖြစ်နေတဲ့ Baekhyun ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ - For her Myanmar
မအေးရီတို့ရေ…ဂုဏ်ဆာလို့မှ ကောင်းရဲ့လား 😛
EXO ရဲ့ ကြယ်ပွင့်လေး Baekhyun ရဲ့ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက် တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ်လေး ထွက်မယ့်အကြောင်းတော့ အားလုံးသိပြီးကြပြီ ထင်ပါရဲ့… အယ်လ်ဘမ်နာမည်ကိုတော့City Lights လို့ ပေးထားပြီး ( မြန်မာလိုဆိုရင် မြို့ပြအလင်းရောင်ပေါ့။ ဘယ်လိုတွေတောင် မိုက်နေမလဲ တအားသိချင်နေပါပြီနော် xD) လာမယ့် ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိမှာပါ။
Baekhyun ရဲ့ IG (အင်စတာဂရမ်)ပေါ်က အင်္ကျီပွပွကြီးနဲ့ ကင်မရာကို နောက်ကျောပေးထားတဲ့ အဖြူအမည်းပုံ၊ Caption “coming soon” – မကြာမီလာမည်မျှော်ဆိုတာကလည်း မအေးရီတို့ကို ရင်မခုန်ခုန်အောင် ကျီစားသလိုလို…
ဒီထက် ပိုပြီး အံ့သြဖို့ကောင်းတာကတော့ ဇူလိုင်မှာ ထွက်မယ့် သီချင်းခွေကို ခုတည်းက Pre-order (ကြိုတင်မှာယူ) စနစ်နဲ့ မှာယူနေကြတာမို့ ခွေမထွက်လာသေးဘဲနဲ့ Ktown4u ရဲ့ Weekly Chartမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး နံပါတ် (၁) နေရာမှာ ဒီခွေရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒုတိယ နေရာမှာတော့ TVXQ ရဲ့ U-Know ရှိနေပြီး တတိယနေရာမှာတော့ Black Pink Photobook Limited Edition ရှိနေပါတယ်။
Related Article>>>ဒါလေးတွေပဲကြည့်ပြီးတော့ EXO မန်ဘာတွေထဲက ဘယ်သူလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ကြလား?
Xiumin, D.O., Baekhyun, Chen, Kai, Sehun, Chanyeol, Suho နဲ့ Lay တို့ အားလုံးထဲမှာ Lay နဲ့ Chen ကပဲ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Chen ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလကပဲ တစ်ကိုယ်တော် အခွေ ထွက်ထားတာပါ။ ခုတော့ ကော်ရီးဘိုဘိုဟုအလှည့်ပေါ့လေ 😛
Chanyeol နဲ့ Sehun တို့ကလည်း လာမယ့် ဇူလိုင်ထဲမှာ နှစ်ယောက်သားပေါင်းပြီး အခွေထွက်ဖို့ စီစဉ်နေတာမို့ ဇူလိုင်လကတော့ EXO-L တွေ အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေမှာ အသေချာပါပဲ။ မုန့်ဖိုးလေးတွေ၊ ဘတ်ငွေလေးတွေလည်း စုထားပေါ့အေ 😛
မအေးရီတို့ရေ…ဂုဏျဆာလို့မှ ကောငျးရဲ့လား 😛
EXO ရဲ့ ကွယျပှငျ့လေး Baekhyun ရဲ့ ပထမဆုံး ပှဲဦးထှကျ တဈကိုယျတျော အယျလျဘမျလေး ထှကျမယျ့အကွောငျးတော့ အားလုံးသိပွီးကွပွီ ထငျပါရဲ့… အယျလျဘမျနာမညျကိုတော့City Lights လို့ ပေးထားပွီး ( မွနျမာလိုဆိုရငျ မွို့ပွအလငျးရောငျပေါ့။ ဘယျလိုတှတေောငျ မိုကျနမေလဲ တအားသိခငျြနပေါပွီနျော xD) လာမယျ့ ဇူလိုငျလ (၁၀) ရကျနမှေ့ာ ထှကျရှိမှာပါ။
Baekhyun ရဲ့ IG (အငျစတာဂရမျ)ပျေါက အင်ျကြီပှပှကွီးနဲ့ ကငျမရာကို နောကျကြောပေးထားတဲ့ အဖွူအမညျးပုံ၊ Caption “coming soon” – မကွာမီလာမညျမြှျောဆိုတာကလညျး မအေးရီတို့ကို ရငျမခုနျခုနျအောငျ ကြီစားသလိုလို…
ဒီထကျ ပိုပွီး အံ့သွဖို့ကောငျးတာကတော့ ဇူလိုငျမှာ ထှကျမယျ့ သီခငျြးခှကေို ခုတညျးက Pre-order (ကွိုတငျမှာယူ) စနဈနဲ့ မှာယူနကွေတာမို့ ခှမေထှကျလာသေးဘဲနဲ့ Ktown4u ရဲ့ Weekly Chartမှာ ရောငျးအားအကောငျးဆုံး နံပါတျ (၁) နရောမှာ ဒီခှရေောကျရှိနပေါပွီ။ ဒုတိယ နရောမှာတော့ TVXQ ရဲ့ U-Know ရှိနပွေီး တတိယနရောမှာတော့ Black Pink Photobook Limited Edition ရှိနပေါတယျ။
Related Article>>>ဒါလေးတှပေဲကွညျ့ပွီးတော့ Exo မနျဘာတှထေဲက ဘယျသူလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးနိုငျကွလား?
Xiumin, D.O., Baekhyun, Chen, Kai, Sehun, Chanyeol, Suho နဲ့ Lay တို့ အားလုံးထဲမှာ Lay နဲ့ Chen ကပဲ တဈကိုယျတျောခှေ ထှကျရှိခဲ့ပွီး Chen ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလကပဲ တဈကိုယျတျော အခှေ ထှကျထားတာပါ။ ခုတော့ ကော်ရီး ဘိုဘိုဟုအလှညျ့ပေါ့လေ 😛
Chanyeol နဲ့ Sehun တို့ကလညျး လာမယျ့ ဇူလိုငျထဲမှာ နှဈယောကျသားပေါငျးပွီး အခှထှေကျဖို့ စီစဉျနတောမို့ ဇူလိုငျလကတော့ EXO-L တှေ အတှကျ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာတှနေဲ့ ပွညျ့နမှော အသခြောပါပဲ။ မုနျ့ဖိုးလေးတှေ၊ ဘတျငှလေေးတှလေညျး စုထားပေါ့အေ 😛
References: metro.co.uk, KPOPtown4u
Tags: Byun-Baekhyun, City Lights, first, July, KPOPtown4u, No (1), release, solo album
သမိုင်းထဲက အာဂအမျိုးသမီးတွေအကြောင်း ယောင်းတို့ ဘယ်လောက်သိလဲ?
Wathun March 26, 2019
ကလေးတွေ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး နာကျင်မှု သက်သာအောင် အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လုပ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ